Kala kulantay White Apple Iyadoo Casriyaynta in macruufka 9?
Tani waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu caansan ee ay u badan tahay in ay la kulmaan marka lagu casriyeeyo si macruufka 9. Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu goyn la isticmaala oo aan garanaynin waxa la sameeyo marka ay la kulmaan dhibaatada. Dhibaatadu waxa ay inta badan muuqato sida screen maran iyada logo Apple mar idiin Celin ah ee aad taleefan ka dib markii update ah. Dhammaan ee aad aragto waa bogga maran iyo wax kale.
Tani waa dhibaato weyn ugu isticmaala gaar ahaan marka aanad garanayn sida in laga takhaluso waxaa ka mid ah ugu yaraan waxa la waxay keeni karaya oo dhan. Nasiib wanaag, waxa jira hab lagu xaliyo dhibaatadan sida aynu wax yar ka arki doonaan.
Qaybta 1aad: Sida loo dayactir White Apple keena macruufka 9 Update
Qeybta 2: Sida loo Iska ilaali White Apple markii lagu casriyeeyo si macruufka 9
Qaybta 1. Sida loo dayactir White Apple keena macruufka 9 Update
Si loo xaliyo baadi tan, waxaad u baahan tahay in yar oo ka mid ah caawimaad. Mid ka mid ah codsiyada ugu waxtarka badan ee macruufka waxaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka . Codsiga waxaa loogu talagalay si loo hubiyo in qalabka macruufka yihiin ayaa si buuxda oo ay ka shaqaynayaan sidii ay tahay in ay. Qaar ka mid ah qaababka in codsigan uu leeyahay in aad ka faa'iidaysan karto waxaa ka mid ah:
Kabsado dhammaan xogta la tirtiro aad ka mid yihiin fariimaha, sawiro, xiriirada, videos ka qalabka macruufka aad.
Suurto gashay in aad ka bogsato xogta lumay
Aad u ogolaanaya in ay gurmad iyo soo celiyo qalabka macruufka aad. Xitaa Waxaad dooran kartaa xogta aad jeclaan lahayd inaad gurmad.
U dayactir nidaamka ka hawlgala qaar ka mid ah qalabka macruufka
Oo weliba, ma ahan oo keliya in, Wondershare Dr.Fone waa la jaan qaada iPhone, iPad iyo iPod taabto oo si fiican u shaqaysa iyada oo mid ka mid ah qalabka macruufka. Iyada oo aan wax oggolow dheeraad ah, aynu eegno sida aad u isticmaali karto Dr.Fone si uu u xaliyo iPhone bricked in uu sababay macruufka 9 update .
Tallaabada Koowaad: Download iyo rakibi Wondershare Dr.Fone si aad u computer ka dibna xiriiriyaan phone in your computer iyadoo la isticmaalayo fiilooyinka USB.
Tallaabada Labaad: On uu furmo suuqa ugu weyn, guji "dayactir macruufka si caadiga ah" iyo Dr.Fone ogaan doonaa qalab aad, mar qalab ayaa la ogaado click on "Start."
Tallaabada Saddexaad: Guji Download, maxaa yeelay, Dr. Phone u baahan yahay inuu soo bixi nooca ugu dambeeya ee aad firmware si ay u hagaajin qalab aad. Sug download si ay u buuxiyaan.
Sida ugu dhakhsaha badan download waa dhamaystiran Dr. Fone bilaabi doonaan inay cusboonaysiiyaan qalab aad. Dayactirka The buuxda oo qalab aad ah waa inuu qaato wax ka badan 10 daqiiqo ka dib oo aad heli doontaa farriin ah in qalab aad hadda si caadi ah u bilaabi doonaa. Just loo hubiyo in qalab aad weli xiran si aad u computer inta ay socoto oo dhan.
Wondershare Ka dhigaysa nidaamka si fudud aad awoodi kartid in la baabi'iyo dhibaatadan waqti aad u tagtaan inaad ku riyaaqayaa qalabka macruufka aad dib u noqon.
Ka hortagga ka fiican yahay daawo iyo waxaa jira dhowr siyood oo aad ka hortagi kara bilawga dhibaatadan. Bal aynu eegno qaar ka mid ah siyaabaha aad ka haysato dhibaatada ku hayn karaa qalab aad.
Qaybta 2. Sida loo Iska ilaali White Apple markii lagu casriyeeyo si macruufka 9
Ayaa mid ka mid ah habka hubisaa in aad telefoonka ka soo bandhigista dhibaatadan waa in laga taxadaraa qalabka. Dhibaatadaan waxaa keeni kara si joogto ah tagtey ama aad telefoon garaacid. Ilaali phone intii suurogal ah si looga fogaado dhaawac.
Gadashada kiiska ka hortag loogu talagalay telefoonka. Xaaladaha Protective u ahaan doona in la hubiyo in aad telefoon lama waxyeelo ka saameyn ku leh meelaha adag sida miisas.
Taleefoonkaaga dami marka aad ha u baahan tahay. Xad dhaaf ah ee aad batteriga iyo khayraadka kale ee hardware keeni kartaa qalab aad u muujiyaan dhibaatooyin dhawr ka mid yihiin "White Apple." Haddii aad ogaato in aad telefoonka waa la ayuuna sanadkan, waxa dami waqti ka waqti si ay u ogalaan inay soo darro.
Ka ilaali arrimo aad updated. Mararka qaarkood dhibaato sababtu tahay kala carar ku software ah oo aad u baahan tahay in si joogto ah loo hubiyo updates software aad telefoon si loo xaqiijiyo in aad macruufka waa ilaa taariikhda.
Sii phone nasasho. Waxaad ku samayn kartaa hal mar bil kasta jeestay telefoonka off ugu yaraan 10 ilbiriqsi. Tallaabadan fudud u oggolaan doonaa wakhti phone si aad u soo nooleeyo oo looga hortago kala carar qaarkood xataa " White Apple Screen . "
Sida loo View tirtiray iMessage History on Windows / Mac OS X
Sida loo Xalliyaan iPhone Notes Icon oo maqan ama wax qarsoon
IPhone dhintay Data Recovery: Ladnaansho Data kuwii dhintay ka soo iPhone
Hab sahlan oo Delete nuqul Songs on iPhone
> Resource > iPhone > kulantay White Apple Iyadoo Casriyaynta in macruufka 9?